Nooca Falanqeynta Teknolojiyada Safari 122 waa la heli karaa | Waxaan ka socdaa mac
Nooca Falanqeynta Teknolojiyada Safari 122 waa la heli karaa
Apple ayaa soo saartay nooc cusub oo ka mid ah biraawsarkooda internetka qeybtii tijaabada shalay galab Safari Falanqaynta Teknolojiyada Safari 122. Nooc diyaar u ah dhammaan kuwa doonaya inay tijaabiyaan, iyadoon loo baahnayn inay noqdaan horumariye, taasina waxay u saamaxaysaa shirkadda inay waxyaabo cusub ku tijaabiso kombuyuutarro kala duwan oo aan la tirin karin, ka hor inta aan loo gudbin nooca asalka ah ee isku dhafan macOS.
Tani waa nooca 122 tan iyo markii nidaamkan tijaabada ah laga bilaabay gudaha 2016. Waxay keeneysaa qaar ka mid ah hagaajinta cilladaha, waxayna sidoo kale hagaajineysaa waxqabadkeedii hore.
Apple ayaa hadda soo saartay cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay Safari Technology Preview, oo ah biraawsarka tijaabada ah ee ay shirkaddu markii ugu horreysay soo bandhigtay bishii Maarso 2016. Noocaan ah biraawsarkooda caanka ah, wuxuu ku tijaabiyaa kuwa cusub ee mar dambe lagu soo bandhigi karo noocyada mustaqbalka ee Safari.
Nooca hadda jira ee Falanqeynta Teknolojiyada Safari waa midka lagu soo daray cusbooneysiinta cusub ee Safari 14 oo lagu soo daray MacOS Big Sur oo lagu taageerayo kordhinta websaydhka Safari ee laga keenay daalacayaasha kale, horudhaca tabta, ogeysiisyada ku xadgudubka erayga sirta ah, Aqoonsiga taabashada webka ee Aqoonsiga Aqoonsiga, iyo inbadan.
Cusbooneysiintan cusub ee Safari Falanqeynta Teknolojiyada ayaa loo heli karaa labadaba MacOS Catalina sida macOS Big Sur, nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka Mac.
Waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo habka cusbooneysiinta software-ka ee Nidaamka Nidaamka ee qof kasta oo soo dejiyey biraawsarka. Qoraallada sii-deynta buuxda ee cusbooneysiinta waxaa laga heli karaa goobta web ka Safari Falanqaynta Teknolojiyada.
Hadafka Apple ee Safari Teknolojiyadda Safari ayaa ah in laga soo ururiyo jawaab celinta ka imanaya horumariyeyaasha iyo adeegsadayaasha dhammaadka ee ku saabsan geeddi-socodka horumarinta biraawsarka. Falanqaynta Teknolojiyada Safari waxay la socon kartaa biraawsarkaaga Safari ee jira, in kasta oo loogu talagalay horumariyeyaasha marka hore, uma baahna koontada horumariyaha si aad u soo dejiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Nooca Falanqeynta Teknolojiyada Safari 122 waa la heli karaa
Apple ayaa ku dhawaaqday Taariikhda la siidaayo xilliga XNUMX-aad ee Park-ka Dhexe